Amerika Latina · Janoary, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Amerika Latina · Janoary, 2011
Tantara mikasika ny Amerika Latina tamin'ny Janoary, 2011
Goatemalà 27 Janoary 2011
Azia Atsimo 25 Janoary 2011
Meksika 24 Janoary 2011
Nampiasa Twitter ilay mpihira ny gadon-kira 'pop' iray, teratany Meksikana ary 28 taona mba hiarovany ny tenany tamin'ny fanendrikendrehana azy ho nanolana zazavavikely tsy ampy taona anankiroa. Nanohana azy tamin'ny fandefasana tweet ireo mpankafy azy, fa ireo hafa kosa dia nanakiana ny haino aman-jery sy ny vahoaka nohon'ny fandraisan'izy ireo am-po an'iny toe-javatra nitranga iny.
Meksika 11 Janoary 2011
Arzantina 10 Janoary 2011
Shily 08 Janoary 2011
Mifanakalo hevitra ireo Chilean mpitoraka bilaogy momba ny volavolan-dalàna ikendrena ny hanaovana ny fanalàn-jaza noho ny antony ara-pahasalamana tsy ho toy ny heloka bevava intsony, zavatra izay noraràna hatramin'ny 1989, ka manome alàlana hampitsahatra vohoka noho ny antony ara-pahasalamana raha toa ilay reny ka mitondra vohoka fantatra fa tsy ho tafita na mety hanohintohina ny ain-dehibeny.
Meksika 07 Janoary 2011
Ny 6 Janoary, mivory ny fianakaviana ary mihinana mofomamy manokana antsoina hoe "Rosca de Reyes" (midika hoe "Mofomamin'ny Mpanjaka"). Mpitoraka blaogy maro no nanoratra momba izany fomban-drazana izany, ny dikany sy ny fomba fankalazàna azy.
Meksika 06 Janoary 2011
Kolombia 06 Janoary 2011
Brezila 05 Janoary 2011